Tiki House-Walk2Beach, 2 Dens, entry floor floor
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAlicia
Kutshanje kulungiswe iikhabhathi ezintsha zasekhitshini kunye ne-quartz countertops, izixhobo zombane, umgangatho, ukupeyinta, ibhedi kunye nebhedi.
I-Tiki House ziinyawo ezingama-800 kuphela ukusuka elunxwemeni! Amagumbi okulala ama-4 kunye neeTV ze-ROKU, iidenari ezi-2 ezahlukeneyo w/IiTV ze-ROKU, iibhafu ezi-3 ezigcweleyo, iTiki Bar kunye netafile eyongezelelweyo kumgangatho osezantsi. Iveranda enkulu yangaphambili enendawo yokuhlala, ishawari yangaphandle, iwasha / isomisi, kunye neWiFi. Indawo yoku-1 yokungena enamagumbi okulala ama-2, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, umqolomba kunye nekhitshi elincinci.
(QAPHELA: Akukho tv iphilayo. , 7ft. iisilingi kumgangatho ophantsi onemitha esezantsi.)
Kunye nokuba kufutshane elunxwemeni, iTiki House ibonelela ngendawo eninzi yeendwendwe zethu.
Umgangatho ongaphezulu uvulekele ekhitshini elinendawo yokuhlala eninzi kunye nomabonakude oyi-intshi engama-65. Umgangatho ongezantsi kunye nendawo yeTV ihlala ecaleni kweTiki Bar yethu, ixhotyiswe ngemicrowave, isinki kunye nesikhenkcezisi esipheleleyo.
Ifakwe kwibhloko enye ukusuka kwi-Spot- edume nge-ayisikrimu kunye nezitya ze-Acai.
I-Putt Putt ikumgama wokuhamba, iivenkile ezithengisayo kunye neeresityu ezikufutshane, kunye ne-Food Lion kumgama nje weebhloko ezimbalwa.
Indawo yokutyela edumileyo (kunye nesiyithandayo) iTortugas ikufuphi. Indlu ihlala phakathi kweendlela ezimbini zokufikelela elwandle kwaye ikufuphi kakhulu neBonnett St. ufikelelo elunxwemeni olunonogada, indlu yokuhlambela, kunye ne-ADA efikelelekayo.
UJay kunye noAlicia bahlala ngaphaya kweNdlela ePhezulu. Fowuna nje okanye ubhale umyalezo ukuba kukho nantoni na oyifunayo!